17 Responses to ပဲဂိုဒေါင်က အကြီးမားဆုံးလောင်းကစားဝိုင်း နောက်ဆက်တွဲ
0846244912 on August 26, 2012 at 4:21 pm
အလွန်တရာမှပင် လေးစားထိုက်ပါသည်။ အချုပ်တန်းစီး၊ အမှုစစ်၊ စခန်းမှူး၊ ရှေ့နေ၊ ဥပဒေအကြံပေး၊ တရားသူကြီး များအတွက် သွားရေတများများ ကျလောက်သော အမှုဖြစ်ပါသည်။ မကြောက်မရွံ့ တောင်းကြပါမည်၊ စားကြပါမည် ။
ကို နှင်းမောင် on August 26, 2012 at 6:48 pm
ဟား……ဟား…………..ကိုသက်ခိုင်ရေ ခင်ဗျားပြောတော့ ခင်ဗျားသမက်မပါဘူးဆို သူကတင်းနစ်ရိုက်နေတာဆို ကောင်းတယ်ဗျာ ဖင်ကောင်းကျယ်တဲ့ကောင်တွေမင်းတို့ ပိုင်တယ်ဆိုကွ
ကို နှင်းမောင် on August 26, 2012 at 8:27 pm
မင်တို့ ကျမှ ကွာ ကြာလိုက်တာ ရှေ့ ဗူးဘုရားဖဲဝိုင်းတောင် ထောင်ကထွက်တော့ မယ် ဖမ်းတဲ့ ဒနကောင်တွေတောင်
zaw zaw on August 27, 2012 at 9:18 pm
ကိုနှင်းမောင်ရေ မပြောမရှိနဲ့ ဦးစိန်လှိုင်သား ကိုအငယ်လေးကသူ့ ယောက်ဖဗိုလ်ချုပ်ရဲအောင်က ရဲချုပ်ကျော်ကျော်နဲ့ တပတ်စဉ်ထဲ ဆိုပြီး ဦးဇော်ဝင်းသားနဲ့ သားမက်အတွက်လိုက်ပေးနေတယ်ဗျ ဒါဆို ဗာဂျီးနီးယားကရှိုးဝိုင်းကျတော့ဘာလို့မဖမ်းလဲ ခရိုင်ရုးံကရဲမှုးဦးမြင့်ဆွေ မန္တ`လေးကဆော်ကြီး လာတော့ဧည့်ခံစားရိတ်ပေးလို့လား…ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးလဲ ခင်ဗျားတို့မြို့မှာ သတင်းတပ်ဖွဲ့ထားမနေပါနဲ့တော့
zaw zaw on August 27, 2012 at 9:38 pm
သူ့သားမက်တောင်သူ ဘယ်လိုက်ရှာ ရမှန်းမသိဘဲနဲ့….ဒီလောက်သိနေရင် golden Key နဲ့ ဂေါက်ကွင်းသွားတာကတမင်လွှတ်ထားတာလား …ဒီနေ့လဲ ဒုရဲအုပ်ဝင်းကျော်စွာ ကစခန်းမှုး ပုသိမ်သွားနေလို့ လာညှိပေးသွားတယ်ဆို….
ဟသ်ာတလမ်းပြကြယ် on August 28, 2012 at 10:28 pm
ဥပဒေအတိုင်း မဆောင်ရွက်ရင် လူ.အခွင်.အရေးအဖွဲ.မှ ဟသ်ာတမြို.နယ်တရားရုံးအား ဆန်ဒပြမည်။ ၂၇. ၉ .၂၀၁၂ နေ.စတင်ပါမည်။
zaw zaw on August 29, 2012 at 9:08 pm
ကြိုဆိုပါတယ် …လမ်းပြကြယ်ရယ်ူဒီလိုဘဲ အုပ်တချပ်သဲတပွင့်လုပ်ပေးရမယ်…ကျုပ်တို့လဲပါမယ်ဗျို့
ကိုနှင်းမောင် on August 28, 2012 at 10:55 pm
ဟင်္သာတမြို့ က သစ် 13
zaw zaw on August 29, 2012 at 9:03 am
အကိုရေ govrrment man တွေ ပါမှာစိုးလို့ တခြားဟာတွေ အာရုံပြောင်းနေတာပါ…SBက တာဝန်ခံကလဲ ဘု၇ားကြီး ၂ လမ်းက သူ့မယားငယ်အိမ် သွားဖို့ဘစဉ်းစားနေတာလေ ….ဒီ without ကိုသတင်းမတင်တာ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးကလဲ လက်ခံလား…clean goverment ဆိုတာ ဒါနဲ့ တူတယ် ..ကားအကောင်းစားစီး စတိုင်ဘောင်းဘီဝတ် ဂေါက်ရိုက်…သန့်တယ်ဗျာ
Thike Soe on August 29, 2012 at 4:32 pm
ခုခေတ်ကြီးထဲမှာဒါမျိုးလက်ကျန်တွေတော့ ရှိနေအုန်းမှာပဲ..ချက်ချင်းလက်ငင်းပြောင်းလဲဖို့ ကတော့မလွယ်လောက်သေးဘူး…စိတ်ဓတ်တွေမှာရိုက်သွင်းခံခဲ့ ရတာကြာနေပြီ…ဒါကြောင့် ပြောသင့်တာလဲပြောကြသလို ကိုယ်တွေဘက်ကရောဘယ်လိုအကျိုးသယ်ပိုးနီုင်သလဲဆိုတာစဉ်းစားရမယ်…ဟိုတစ်ချီန်တုန်းကရော ကိုယ်ဟာ ဟုတ်ကဲ့ဆိုတဲ့ အထဲရော အများမိုးခါးရေသောက်တဲ့ထဲရော ပါခဲ့သလားဆိုတာပါစဉ်းစားသင့်တယ်…စိတ်သန့် သန့် နဲ့ ပြောသလားဆိုတာလဲအဓိကကြပါတယ်…..
ကို နှင်းမောင် ဟင်္သာတ(သတင်းထောက်) on August 31, 2012 at 7:15 pm
rightwanted@gmail.com on August 30, 2012 at 2:03 pm
kyawkyaw on September 1, 2012 at 9:28 am
ဟသ်ာတရဲတပ်ဖွဲ. ခင်မောင်မြင်.ကိုကြောက်နေတာလား ပြည်ထဲရေးက ညွှန်ချုပ်တွေ ဘာလုပ်နေတာဠလဲ
rightwanted on September 1, 2012 at 11:43 pm
Win Ko Ning (ဟင်္သာတ) အမှတ်(၁) မှဒုရဲအုပ်တစ်ဦး၏အကူအညီလဲပါပါတယ် on September 5, 2012 at 8:27 pm
ကျွန်တော့်အနေဖြင့် အကြံ ပြုလိုသည်မှာ အောက်ခြေ၀န် ထမ်းများ၏ အဂတိလိုက်စားခြင်း ကင်းရှင်းစေလိုပါက အထက်အ ဆင့်ဆင့်အရာထမ်းတို့၏ ဗျူရိုက ရက်တစ်ဆန်သော စိတ်ဓာတ် များကို ဦးစွာပြင်ဆင်ရန် လိုအပ် သည်ဟု ထင်မြင်ယူဆမိပါသည်။ အဆင့်ဆင့်သော အရာထမ်း အကြီးအကဲတိ
www.editors@moemaka.com on September 9, 2012 at 12:48 am
ကြယ်စင် on September 7, 2012 at 7:43 pm
သတင်းတွေဟိုပြောဒီပြောပြောနေကြတဲ့ကြားထဲ လှိုင်သာယာမှာဖမ်းမိတဲ့ သစ်ကားကိစ္စကိုတော့ဘာလို့ချန်လှပ်ထားလဲမသိဘူးနော်။ ထ/၄၂၂ ကားနဲ့လှိုင်သာယာအဝေးပြေးရှေ့မှာဖမ်းခံခဲု့ရပြီး၊သောင်ကြီးစခန်းမှာအမှုဖွင့်အရေးယူနေတယ်။
MoeMaKa Reader - မိုးပျံတံတားတွေအတွက် သစ်ပင်ကြီးတွေကို စတေးမယ်